Headspace: Meditation & Sleep 3.36.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.36.0 လြန္ခဲ့ေသာ 14 မိနစ္က
Application မ်ား က်န္းမာေရး & ႀကံ႕ခိုင္ေရး Headspace: Meditation & Sleep
Headspace: Meditation & Sleep ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Headspace ကျန်းမာရေးနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုမှသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလမ်းညွှန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်ကအာရုံစူးစိုက်ကူညီရှူ, အေးဆေးတည်ငြိမ်နေဖို့, သင့်ကိုအကောင်းဆုံးမှာလုပ်ဆောင်ပါနှင့်အပန်းဖြေ, ဘာဝနာများနှင့်သတိ၏ဘဝ-ပြောင်းလဲနေတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုမှတဆင့်ပိုကောင်းတဲ့ညဥ့်ရဲ့ကြွင်းသောအရာရပါလိမ့်မယ်။ ပဲမိနစ်အနည်းငယ်နေ့ရက်ကာလ၌, သင်ကကျန်းမာသန်စွမ်း, ပျြောရှငျ, စိတ်ဖိစီးမှု-အခမဲ့အသက်အဘို့သင်တို့စိတ်နှလုံးကိုနှင့်ခန္ဓာကိုယ်လေ့ကျင့်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရပါလိမ့်မယ်။ ညအချိန်တွင်ကောင်းစွာအိပ်ပျော်ဖို့ဘယ်လိုအပေါ်တစ်ဦးကြမ်းတမ်းတစ်ရက်သို့မဟုတ်လမ်းညွှန်မှုကာလအတွင်းစိတ်ဖိစီးမှုသက်သာနည်းနည်းလိုအပ်ပါသလား? Headspace ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ သင်ပြုရန်ရှိသည်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအခမဲ့ဘာဝနာ, သတိနှင့်အိပ်စက်ခြင်း app ကို download ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက်ရုံ, ပြန်ထိုင်အနားယူနှင့်အသက်ရှူ။
ဒီတရားအားထုတ်ခြင်းနှင့်အိပ်ပျော်ခြင်း app ကို ဘာ:
○အဆိုပါ Headspace ဘာဝနာ app ကိုရှူရှိုက်ကိုဆငျခွငျနှင့်သတိအသက်ရှင်ဖို့သင်မည်သို့သင်ပေးတယ်။ သူကတောင်အာရုံတိုးတက်စေရန်သက်သေပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုကယ်ဆယ်ရေးစီမံခန့်ခွဲရာမှအသက်ရှူဖို့အရာအားလုံး, ပျော်ရွှင်မှုကို, အေးဆေးတည်ငြိမ်နှင့်အာရုံပေါ်မှာလေ့ကျင့်ခန်းရှိပါတယ်။ သငျသညျရှေ့တျော၌ဆင်ခြင်ဘယ်တော့မှပြီးပြီဆိုပါကမစိုးရိမ်ပါနဲ့။ သငျသညျတရားအားထုတ်ခြင်းနှင့်သတိ၏အခြေခံလိုအပ်ချက်များသင်ပေးပါလိမ့်မယ်တဲ့အခမဲ့အခြေခံသင်တန်းရှိတယ်။
Headspace အတွေ့အကြုံကိုအားဖြင့်အိပ်စက်ခြင်း, သင်ငြိမ်ဝပ်စွာနေရသောနေရာတစ်နေရာရန်သင့်အားလမ်းပြအိပ်ပျော်ခြင်းဆင်ခြင်, အိပ်ပျော်ခြင်းအသံများနှင့်အထူးဒီဇိုင်း sleepcasts ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ မျက်နှာပြင်မဲမှောင်ပြီးခလုတ်ရှာတွေ့ရန်လွယ်ကူရှိပါတယ်ဒါကြောင့် Headspace အားဖြင့်အိပ်စက်ခြင်းနာမငြိမ်ပာ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ပတ်ပတ်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အားလုံးပြီးနောက်အဘယ်သူမျှမညအချိန်တွင်တောက်ပသောမျက်နှာပြင်ကိုကြည့်ဖို့လိုသည်။ ဒါဟာသင်ဒုက္ခအိပ်ပျော်ကျသွားရှိမရှိစုံလင်သောင်သို့မဟုတ်သင်ညဥ့်အလယ်၌နှိုး။
○, သင်အနားယူကူညီရန်ဂန္ဘာဝနာများနှင့်အပန်းဖြေနည်းစနစ်ကိုလေ့လာပါကသင်၏စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်သောကစီမံခန့်ခွဲခြင်း, တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်အိပ်စက်ခြင်းနဲ့တူကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းအရာများအပေါ်
ဆင်ခြင် များဖုံးလွှမ်းဘယ်အရာကို themes များ:
အသင်တန်းများ : တစ်ခုချင်းစီကိုသင်တန်းကိုသင်ကျွမ်းကျင်စွာကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းအရာများစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ကျန်းမာအလေ့အထများဖွဲ့စည်းရန်ကူညီရန်ဒီဇိုင်းပဲ့ထိန်းတရားအားထုတ်ခြင်း၏တစ်ဦးစီးရီးရှိပါတယ်။ တစ်ခုစိုးရိမ်ပူပန်တိုက်ခိုက်စဉ်အတွင်းအသက်ရှူသင်ကိုယ်တိုင်အပေါ်ခက်ခဲဖြစ်ခြင်းနေတဲ့အခါမှာတချို့စိတ်ဖိစီးမှုကယ်ဆယ်ရေးရသို့မဟုတ်တစ်စိတ်ဖိစီးမှုတစ်နေ့တာအတွင်းအပန်းဖြေဖို့သင်ယူပါ။
○စိတ်ဖိစီးမှု & စိုးရိမ်စိတ်ဘာဝနာသင်တန်းများပါဝင်သည်: စီမံခန့်ခွဲတော့ပူပန်, စိတ်ဖိစီးမှု၏ Go ကို, နာမငြိမ်, Navigator ပြောင်းလဲခြင်းတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်
○ကျဆင်းလာအိပ်ပျော် & နှိုးထဘာဝနာသင်တန်းများပါဝင်သည်: အိပ်စက်ခြင်း, အညစ်
○ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတိုးတက်မှုနှုန်းဘာဝနာသင်တန်းများပါဝင်သည်: Relationships, ကိုယ်ပိုင်လေးစားမှု, ကြင်နာမှု, ပျော်ရွှင်မှု, လက်ခံ, ကျေးဇူးတင်ကြောင်း, Balance, စိတျရှညျ, ရက်ရောမှု
○သူ Work & ကုန်ထုတ်စွမ်းအားဘာဝနာသင်တန်းများပါဝင်သည်: ရှာဖွေခြင်းအာရုံစိုက်, စားပေး, Productivity, တီထွင်ဖန်တီး
○ဘဝကတရားအားထုတ်သင်တန်းများစိန်ခေါ်ပါဝင်သည်: ဒေါသပြောင်းလဲ Sadness ကိုင်တွယ်ခြင်း, နောင်တနှင့်အတူဖြေရှင်း, ကိုယ်ပိုင်လေးစားမှု, ပူဆှေး
○လှုပ်ရှားမှုနှင့်အားကစားဘာဝနာသင်တန်းများပါဝင်သည်: Motivation, အာရုံစိုက်, သင်တန်း, ပြိုင်ပွဲ, ဆက်သွယ်ရေး, သုံးသပ်ခြင်း, ပြန်လည်ထူထောင်ရေး, Rehab, အာရုံစူးစိုက်မှု
○ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဘာဝနာသင်တန်းများပါဝင်သည်: စိတ်ကိုစား, တဏှာ, နာကျင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခြင်း, ကိုယ်ဝန်, ကင်ဆာရောဂါနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခြင်း
○ကျောင်းသားဘာဝနာသင်တန်းများပါဝင်သည်: မူလစာမျက်နှာထွက်ခွာ, အာရုံနှင့်အတူဖြေရှင်း
သည်ကလေးများ သည်များအတွက် Headspace: အငယ်ဘာဝနာများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပဲ့ထိန်းလေ့ကျင့်ခန်း။ ခေါင်းစဉ်များပါဝင်သည်: အိပ်စက်ခြင်း, Up ကိုနိုး, တည်ငြိမ်သော, အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ပိုပြီးပေးဆောင်။
ကိုလူပျိုဆင်ခြင် : အဲဒီမှာအသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်း, စိတ်ဖိစီးမှုကြိမ်များမှာ visualization လေ့ကျင့်ခန်းကိုသင်အနားယူကူညီဖို့အလုပ်များရက်, နှင့်သတိသမ္လေ့ကျင့်ခန်းအတွင်းမှာသင်ကယ်ဆယ်ရေးတစ်နည်းနည်းပေးရ။
○ Headspace တစ်ခုတည်းဆင်ခြင်ကျန်းမာရေး, ပျော်ရွှင်မှုကို, အလုပ် & စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အားကစားတို့ပါဝင်သည်
○သင်ပိုမိုအတွေ့အကြုံရှိနေလျှင်သင်ဘာဝနာအသစ်သို့မဟုတ် unguided ဆိုရင်အဲဒီပဲ့ထိန်းနိုင်ပါတယ်
အိပ်စက်ခြင်း, စိတ်ဖိစီးမှု, စိုးရိမ်ပူပန်မှု, အလုပ်, ခရီးသွား, အားကစား, အာရုံ, လှုံ့ဆျောမှု, သင်တန်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးအပေါ်○ One-ချွတ်ဘာဝနာအစည်းအဝေးများ
○ Plus အား, အရည်ပျော်ကျခြင်းအချိန်လေးအတွင်းမှာအချို့ကိုသင်ကယ်ဆယ်ရေးပေးရခြောက်လအရေးပေါ်အစည်းအဝေးများ။
ကိုမျက်လုံး-ပွင့်လင်းလေ့ကျင့်ခန်း : နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများမှသတိကိုထည့်သွင်းဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ One-ချွတ်သတိလေ့ကျင့်ခန်း။
○မျက်လုံး-ပွင့်လင်းလေ့ကျင့်ခန်းများပါဝင်သည်: လျှောက်လှမ်းခြင်း, ဟင်းချက်, စား, ခရီးသည်နှင့်ပိုပြီး
Headspace: Meditation & Sleep အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Headspace: Meditation & Sleep အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Headspace: Meditation & Sleep အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Headspace: Meditation & Sleep အား အခ်က္ျပပါ
fcukfac စတိုး 46 104.37k
Headspace: Meditation & Sleep ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Headspace: Meditation & Sleep အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 3.36.0
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.headspace.com/privacy-policy
Release date: 2019-09-23 18:36:01
လက်မှတ် SHA1: 71:3A:1A:13:82:98:69:11:7D:C7:CE:64:24:22:64:83:5D:C9:97:6F
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Maria Schonfeld
အဖွဲ့အစည်း (O): Headspace Meditation Ltd
Headspace: Meditation & Sleep APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ